सोमबार, ८ जेष्ठ, २०७४ मा प्रकाशित,
करिब १९ बर्ष पछि भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्बाचनमा नेकपा एमालेले अग्रस्थान हाँसिल गरेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पछि पार्दै एमाले अग्रस्थानमा हुनुको कारण साथै समसायिक राजनीतिक गतिविधिका विषयमा केन्द्रीत रही एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग इमेज च्यानलको ‘सम्भास’ कार्यक्रमका लागि विजय पौडेलले गर्नुभएको कुराकानीको अंश :
तपाईंले बनेपाको विजयी सभामा ‘कांग्रेसको यतिधेरै मत कसरी आयो’ अभिब्यक्तिको अर्थ के हो ?
नेकपा एमालेले जस्तो नीति लिएको छ, जस्तो कार्यक्रम लिएको छ, जस्तो दृष्टिकोण लिएको र जस्तो ब्यवहार गरेको छ, जुन निष्ठाका साथ काम गरेको छ, देशभक्तिको सवाल होस, लोकतन्त्रको सवाल होस, सामाजिक सद्भावको सवाल होस, सामाजिक न्याय र समानताको सवास होस, राष्ट्रिय एकताको सवाल होस वा समृद्धिको सवाल होस सबैमा इमान्दारिता देखाएको छ । त्यतिमात्र नभई छिमेकीहरुकोसँगको सम्बन्धको सवाल होस अथवा विदेश निती र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा एमालेले परिपक्वता देखाएको छ । अझ देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति निष्ठा देखाएको छ । त्यसैले यो भन्न जरुरी ठाँने । त्यस हिसाबमा नेकपा एमालेको अग्रस्थान त आएको छ तर यो काफी छैन् । यतिबेलासम्म एमालेले १ सय ४५ स्थानमा जित्नुपर्दथ्यो । त्यो हुन सकिरहेको छैन् ।
म यसमा कसैलाई दोष दिने प्रयास गर्दिन् । यद्यपी, सत्ताको दुरुपयोग र भ्रमपूर्ण प्रचार हामीले देखेका छौं । प्रचार संयन्त्रहरुको दुरुपयोग भएको छ । बुथ कब्जा हुन्छ, त्यहाँ प्रहरीको दुरुपयोग भएको छ । यी कुराहरुले असर पारेको छ ।
पहिलो त दोलखा घट्ना हेरौं न, त्यसपछि अरु घटनाहरु पनि धेरै छन् । एमालेका तर्फबाट बनाइएको ‘हाजिरी जवाफ’ प्रचारशैलीलाई बङ्याएर अनैतिक प्रचार सत्तापक्षबाट भएको छ, त्यस्ता धेरै दुसप्रयासहरु भएका छन् । यसका लागि हामीले संसदीय छानविन समिति बनाऔं भनेका छौं ।
होइन, मैले त्यसो भनेको होइन । केही ठाउँहरुमा नाङगो धाँधली भएको छ । धाँधली धेरथोर कांग्रेसले गरेकै छ । तर म यतातिर जाँदिन, हामीले जनतालाई अझै भ्रममुक्त पार्न सकेका रहेनछौं भन्ने प्रमुख कुरा छ । यहाँ कस्तो छ भने केही पार्टीका नेताहरु ठिक छैन भनेर भन्न सकिरहेका छैनौं ।
हामीले विभिन्न दलहरुसँग विभिन्न स्थानमा सहकार्य गरिरहेका छौं । हामी अरुसँग मिल्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौं ।
फरक दलको विचार र नीतिलाई मानेर होइन की तर पहाड र तराई छुट्टाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । संवैधानिक प्रक्रिया र संसदीय सर्बोच्चतालाई कमजोर पार्ने कुरा, स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने कुरामा हाम्रो मत मिल्दैन् । लोकतान्त्रिक शक्ति, राष्ट्रियता र विकासको दृष्टिकोणमा एक हुने शक्तिलाई तालमेल गरेका हौं । सरकारमा नभएको पार्टीसँग तालमेल गरेका हौं ।
मलाई लाग्छ यो सुनिश्चित छ । यद्यपी, बैशाख ३१ मै गर्नुपर्दथ्यो । खेतीपातीको समय र गर्मीको समयको जेठ ३१ मा चुनाव हुनु गलत थियो ।
दोस्रो चरणको निर्बाचनमा तपाईंहरु मधेसमा कसरी भोट माग्नुहुन्छ ? मधेसीहरुले त चोट लागेको महसुश भएको छ त ।
के मैले मधेसको विकासका लागि असाधारण बजेट छुट्टाएँ ? के भएर चोट लाग्यो ? धेरै योजनाहरु मधेसका लागि छुट्टाइएको छ त । मधेसी जनताको भावनामा चोट पुर्याउने कुनै कुरा हामीले गरेका छैनौं ।
यसका बारेमा मैले प्रधानमन्त्री भएर पनि अनुभव गरें । यसबारेमा दुवैतर्फको कमजोरी देखिन्छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध मर्यादित ढंगले चल्नुपर्छ तर यस मानेमा हाम्रो कमजोरी पनि छ । नेपालका पक्षबाट आफ्नो प्रष्ट कुरा पनि भन्न नसक्ने अनि भारतले पनि भन्न नसकेर समस्या भइरहेको छ । दुईवटै सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक हुन् । पारस्पररिक लाभ र सम्बन्धका सवालमा कुराहरु हुन सकिरहेका छ्रैनन् ।
संविधान शंसोधन, सिमांकन हेरफेरका सवालमा चुनावपछि निर्णय गर्न जरुरी छ । संविधान विपरित सरकार चल्छ भने उहाँहरुलाई हामी संविधान अनुसार चलाउन तयार छौं । चुनावका बीचमा शंसोधन कसरी सम्भव छ ? बलजफ्ती सम्झौता गर्ने र हामीले औठाछाप गरिदिनुपर्ने ? यो सम्भव छ्रैन् । हामी छलफल गरेरै अघि बढौं भनिरहेका छौं ।